Waxayna raadiyeen ay farriimo muhiim ah oo ku saabsan qoraalka iPhone waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in tani waxay u oggolaanaysaa user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, iyo sidoo kale si loo hubiyo in farriimo taariikhi ah waxaa la baadhay fudayd iyo qanacsanaan . Si kastaba ha ahaatee mararka qaarkood user helo galay arrinta marka ay timaado arrin ka dibna arrimaha dhacaan arrintan la xiriira. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan go'aamada arrimaha marka ay timaado raadinta fariin qoraal ah iyo go'aamada la xidhiidha in la hirgaliyo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta arrinta sakhiray.
Ma baadhi kartaa fariimaha qoraalka ah ee iPhone sida arrimaha guud
Ka dib markii qaar ka mid ah arrimaha user a wajahaya marka ay timaado raadinta fariin qoraal ah oo sidoo kale wuxuu hubiyaa in codsiga ah go'aamada la xiriira noqdo mid fudud oo joogto ah.
macruufka 9 arrimaha
Waxaa by fog dambayn iyo arrinta ugu wajahay ee waqtiga oo dhan sida ay hubineysaa in macruufka 9 hagaajinta ra'iyi iPhone wax keenaysaa in arrinta. Arrintan ayaa sidoo kale yarada waxay oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah naadiyada tayo tahay la raacay in ay u xalin style sameeyo.
Fariin raadinta gaarka ah
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha oo hana u oggolaan in user si loo hubiyo in fariin qoraal la keywords gaar ah raadinta ah waxa uu ku yaalaa iyo waxa ku jira ka dibna la akhriyo. Tani waa arrin loo yaqaan gudahood macruufka 8 iyo 9 macruufka iyo ilaa taariikhdan shirkadda ayaa sii daayay kasta oo ammaanka ama barnaamijka balastar si loo hubiyo in arrinta la xalin fudayd iyo qanacsanaanta.
Arrimaha Barta bartamaha search
Barta bartamaha raadinta hubiyaa in qalab la marsiiyey xabbad ah oo la xidhiidha macluumaadka laakiin tani waxay sidoo kale ayna mararka qaarkood keenaya dadka isticmaala si ay u canaan tufaax arrintan la xiriira. Forums tufaax waa meesha ugu fiican si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka info tahay ee lagu helay in arrintan la xiriira.
Arimaha kale ee la xidhiidha codsiga fariin yihiin goobaha iyo Ota arrimaha ay fududdahay in la xaliyo u casriga ah ee loo isticmaalo bixio laakiin waqtiyada intooda badan isticmaala savviest sidoo kale aan karin inay xaliyaan dhibaatooyinka iyo sabab la mid ah waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in tutorial ah la akhriyo ilaa dhammaadka si loo xaliyo arrimaha wax la xiriira.
Sida loo raadiyo fariimaha qoraalka ah ee iPhone
Geedi socodka baadi fariimaha qoraalka ah ee ka badan iPhone waa u fududahay oo waxaa la sharaxay si faahfaahsan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in tallaabooyinka ay tahay in la raaco si loo hubiyo in natiijada yahay oo waafaqsan shuruudaha user :
User 1. baahan yahay si loo hubiyo in shaashadda weyn ee app fariin waxaa taabtay si ay u soo saarey si loo bilaabo nidaamka:
2.Beerta user markaas u baahan yahay in la hubiyo in gudahood raadinta qataara ee keywords ku habboon ama ay dhacdo in this fudud, erayadii waa la qoraa makiinad si loo hubiyo in fariinta ay khusayso ama koox ka mid ah fariimaha arbushin ilaa iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
Sida loo raadin fariimaha tirtiray on iPhone
Wondershare Dr. Fone ee macruufka waa ugu fiican oo gobolka ka mid ah codsiga tahay in la soo saaro si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado wax kaqabashada oo ka mid ah fariimaha qoraalka ah ee la tirtiray. Barnaamijku waa fududahay in la isticmaalo iyo sii wadida iyo sabab la mid ah waxaa lagu qiimeeyaa sare by users ah. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado ay raadinayaa qoraalka sida qaababka in lagu gundhig gudahood waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka ee jeer oo dhan ka dhigaysa.
Hoos waxaa ku taxan qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijka in ay hubiyaan in doorasho user la falanqeeyay sida ay go'aan wax iibsiga ah ka dhigi lahaa:
Waxa ay taageertaa oo dhan iDevices in user a magacaabi karaa oo halkan waxa ay taasi la hubiyo in user marna laga qaxay marka ay timaado qoraal fariin raadinta.
Marka laga reebo fariimaha barnaamijka ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in sawiro, taariikhda WhatsApp iyo VM ayaa waxaa sidoo kale la baaray hab ugu fiican. Muuqaalada New ayaa sidoo kale lagu daray taas oo muujinaysa xirfad barnaamijka.
Barnaamijka waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in macruufka waxaa cusboonaysiiyey habka ugu fiican marka ay si aan caadi ahayn ku-simaha.
Ayaa gurmad iCloud waxaa sidoo kale ay taageerayaan barnaamijka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in gurmad iCloud ay sidoo kale dib loo soo celiyo haddii ay dhacdo mashaqada kasta.
User ayaa ku eegaan karo xogta ka hor dib u soo kabashada oo keliya si loo hubiyo in wax walba si sax ah oo waafaqsan shuruudaha.
1.Make hubiyo in barnaamijka la soo bixi rakiban oo ay maamulaan si loo bilaabo nidaamka:
2.Beerta user markaas u baahan yahay in lagu xiro qalab nidaamka si ay u hubiyaan in barnaamijka waxaa lagu ogaadaa,
3.Click on the "Start Scan" button, iyo qalabka waxaa ka dibna si loo baadho farriimaha qoraalka iyo content kasta oo la xiriira kale ee la tirtiray:
4.The user markaas u baahan yahay in la hubiyo in content in ay tahay in la soo celiyo waa ka dibna waa la hubiyaa inay si dheeraad ah sii wadi arrintan la xiriira:
5.The caga la doonayo waxaa ka dibna in la soo xulay si ay u hubiyaan in habka uu dhamaado iyo user helo natiijada ugu wanaagsan:
> Resource > iPhone > Sida loo Raadi fariimaha qoraalka on iPhone